Otu esi etinye & Jiri ClamAV na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
October 30, 2021 August 28, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa EPEL
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ma jiri ClamAV na Rocky Linux 8.
Dị ka ezinụlọ RHEL niile, Rocky Linux na-eji SELinux; nyere ka ClamAV si arụ ọrụ, ị ga-achọ ịhazi ya ka ọ ghara nnyonye anya. Iji mee nke a, mee iwu a:
Iji wepu ClamAV na sistemụ arụ ọrụ Rocky Linux 8 gị bụ usoro dị ngwa. Mezuo iwu ọnụ ọnụ iji wepụ:
N'ime nkuzi na-esote, ị mụtala ka esi etinye, melite, na iji ihe atụ ClamAV na nkesa Rocky Linux 8 gị. N'ozuzu, ClamAV bụ ezigbo nyocha nje. Ọ bụ nke kacha mma? Ọfọn, nke ahụ bụ ruo arụmụka mgbe nile na ngwaahịa ndị ọzọ na-ebili ma na-ada; Otú ọ dị, ClamAV na-anọkarị n'elu 1 ruo 3 na ọtụtụ akwụkwọ ndị mmadụ na ọ bụ mgbalị siri ike iji nyere aka chebe sistemụ arụmọrụ gị na email na ma ọ bụ sava weebụ site na nje, malware, na ihe egwu ndị ọzọ.
Categories Nkume linux Tags ClamAV, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye Gulp.js na Rocky Linux 8